Ochwepheshe Bemidiya Yezenhlalo egcekeni lakho! | Martech Zone
NgeSonto, Okthoba 19, 2008 NgeSonto, uJanuwari 13, 2013 Douglas Karr
Imithombo yezokuxhumana iyibhizinisi elichumayo njengamanje, noma ngabe umnotho wethu ukuwona. Ngikholwa ukuthi kunezizathu ezintathu zalokho:
Imithombo yezokuxhumana iyindlela yokuzibandakanya enzima ukuyikhohlisa noma ukuyenza imbongolo.
Imithombo yezokuxhumana iyindlela engabizi kakhulu, edinga isikhathi kepha hhayi izinsiza eziningi ezibizayo.
Imithombo yezokuxhumana iyindlela eyinhloko yokutholwa (izinjini zokusesha ziyayithanda) nokugcinwa (okuvumela ukuxhumana nobudlelwano).
Ukuvukelwa kwemithombo yezokuxhumana kudume kakhulu kangangokuba sekuqala ukukhiqiza ongoti besifunda. Laba bantu basebenze kwezokukhangisa, ukumaketha, kanye / noma ubuchwepheshe be-inthanethi iminyaka eminingi, kepha bagxumele kwimithombo yezokuxhumana ngoba bayakubona ukubaluleka namandla. Nazi ochwepheshe abathathu besifunda:
UKyle Lacy: Imithombo Yezokuxhumana, i-Indianapolis
Lapha e-Indianapolis, bengisebenza naye UKyle Lacy ngonyaka odlule noma kunjalo. UKyle ubesebenza kanzima ukuzimisela njengo the isazi seSocial Media. Cinga Imithombo Yezokuxhumana Indianapolis, futhi uzothola uKyle abekwe # 1!
Akumangazi ukuthi uKyle unothando olungapheli lwendlela - uzomthola ku-24/7 ekwakheni ubudlelwano Umngani, Encane i-Indiana, nayo yonke enye indawo engaba khona kunetha. Usebenza namakhasimende avela kuyo yonke imikhakha lapha edolobheni futhi ushayela umdlandla wakhe wokukhangisa online kuwo wonke amasu.
UJason Falls: Imithombo Yezokuxhumana, eLouisville
KumaMasters eBusiness Online akamuva, ngiye engqeshweni kaJason Social Media Strategies: Marketing in a Web 2.0 World. Isiza sikaJason I-Social Media Explorer ingenye engikade ngiyilandela isikhathi esithile. Bengikade ngihlela ukwehlela eLouisville isikhathi eside impela ukubona uJason kodwa kukhona obekuphazamisa njalo… ngijabule kakhulu ukuthi ekugcineni sihlangane!
Ngenkathi ngisebenza kwezokumaketha okuqondile, ukumaketha kwe-database, kanye nobuchwepheshe bokumaketha kule minyaka eyishumi edlule, uJason usebenze ohlangothini lwe-Public Relations kanye negama lebhizinisi. Ngiyakujabulela ukufunda ibhulogi yakhe ngoba umbono engingalethi wona etafuleni. Qiniseka ukuthi ungeza ifayela le- Okuphakelayo kwe-Social Media Explorer ohlwini lwakho lokufunda. Lapho ngikhuluma noJason emcimbini, ngihlonishwe ngokuthi naye ifunda ibhulogi yami!
UMike Sansone: Imithombo Yezokuxhumana, iDes Moines
UMike angahle abe ngumuntu omuhle kunabo bonke ezinkundleni zokuxhumana! Mina noMike besilokhu silandelana amabhulogi iminyaka embalwa manje. Ibhulogi yakhe, Inguquko igxila ekusebenziseni amabhulogi ukusiza ukuqhuba ibhizinisi nomphakathi.
Ngubani osemuva kwegceke lakho?
Ukuthola isazi semithombo yezokuxhumana yesifunda kubalulekile ebhizinisini lakho. Uma ubheka imali yakho engenayo futhi iningi lemali yakho engenayo ingeyasendaweni, lapho-ke kufanele uthole ukuthi banjani ochwepheshe besifunda. Bangakwethulela kumanethiwekhi nososeshini abazoshayela ithrafikhi eningi beze ebhizinisini lakho, bakusize ngemvelo yezokuxhumana yasendaweni, futhi baxhumane nemicimbi yesifunda.
Uma ungungoti wezokuxhumana wesifunda kwelinye idolobha noma isifundazwe, zizwe ukhululekile ukuphawula lapha ngokuthi ungubani, ukuphi, nokuthi wenzani. Mhlawumbe sekuyisikhathi sokuthi siqale umkhombandlela wethu wesifunda?
I-Oct 19, i-2008 ku-2: i-26 PM
Angazi noma kungenxa yokuthi ngingowaseCanada noma mhlawumbe ngoba angikaze ngizibize "ngochwepheshe bezokuxhumana nabantu" ukuthi kube nzima ukuzibiza. Mhlawumbe kungenxa yokuthi angazi ukuthi ngingakuchaza kanjani ukuthi uyini “uchwepheshe wezokuxhumana”? Kufundwa iposi likaChris Brogan (http://www.chrisbrogan.com/what-i-want-a-social-media-expert-to-know/Ngingazichaza ngibe munye. Ukufunda okunye okuthunyelwe ngabantu obabhalile kungenzeka ngiwele kuleso sigaba, kodwa futhi ngithanda ukugxila kwezinye izindawo nakwizinkundla zokuxhumana. Mhlawumbe lokho kungaba okuthunyelwe kwakho okulandelayo. Uyini uchwepheshe wezokuxhumana?
Okthoba 20, 2008 ngo-8: 32 AM
Ngithobekile ngokumenyezelwa kokuthunyelwe. Ngibonga kakhulu ngomusa ongikhanyisele kuwo ngonyaka odlule. Ungamvumeli akukhohlise, uDoug ungomunye wochwepheshe bezokuxhumana abaphambili eMidWest.
I-LGR: umqondo wokuba yisazi seMidiya Yezokuxhumana uvuleke ngokuphelele. Ngabelane ngemicabango yami ngencwadi (piggybacking off of Brogan). Ungaba i-adaptha yokuqala noma umamukeli we-geuine.
I-Leigh Choate - iBazaarvoice
I-Oct 20, i-2008 ku-2: i-27 PM
Lokhu okuthunyelwe okuhle, futhi kufanele kusikhumbuze ukuthi akudingeki ukuthi siye “emhlabeni wonke,” empeleni, ukuba nomthelela ezinkundleni zokuxhumana. E-Austin, sikhuluma nabaninimabhizinisi bendawo ngalokho esikwenzile kanye nokubaluleka ngalokho okwenziwa yimikhiqizo yethu. Isibonelo somkhankaso we-grasswroots wasendlini kwakuwumkhankaso wokuqasha i-Facebook, lapho wonke umuntu waseBazaarvoice owayene-akhawunti ye-FB efinyelela kunethiwekhi yakhe ngasikhathi sinye (sakhulisa kakhulu ukuvakashelwa kwamasayithi nokudluliselwa).
Kuhle ukwazi ukuthi abantu basebenzisana ubuso nobuso kanye naku-inthanethi!
I-Oct 21, i-2008 ku-4: i-41 PM
Ngiyawuthanda umqondo wesikhombi sesifunda. Nayi enye indawo ezwakale kusuka: Miami, FL.
Ngisebenzisa iSocial Media / New Media Consultancy ezinze eMiami ebizwa nge-Clearcast Digital Media. I-hook yethu ukuthi ngenxa yeminyaka yami engu-15 + yesipiliyoni njengomkhiqizi we-TV, sakha futhi kokubili okuqukethwe kwevidiyo nevidiyo. Ngamanye amagama, sisiza ukwakha bese sikhiqiza futhi sisabalalisa umyalezo wakho.
IMiami iyimakethe ehlekisayo okuthi, ngandlela thile, ihlale ibonakala isemuva kancane kulo lonke izwe. Sengikushilo lokho, ngiyazibuza ukuthi “izwe lonke” likuphi mayelana nezinkampani ezifuna usizo lwe-SM ngaphandle.
Okthoba 22, 2008 ngo-9: 11 AM
Ngiyawuthanda umqondo wesikhombi sesifunda. Nayi enye ifomu elizwayo lesifunda; miami, FL.